Cusbitaalka Guud Ee Hargeysa Oo Qaadhaan Loo Weydiiya Bulshada Somaliland – Araweelo News Network (Archive)
Hargeysa(ANN)Shir lagu falanqaynayay Baahiyaha Cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa, isla markaana dhaqaalle loogu ururinayo ayaa maanta lagu qabtay dhismaha Cusbitaalka Guud ee Hargeysa.Shirkaa oo ay ka soo qaybgaleen guddida caafimaadka ee
gobolka Maroodi jeex, agaasimaha cisbitaalka guud, guddoomiyaha Hay”adda maamul wanaaga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ,xubno ka tirsan guddida cusbitaalka iyo marti sharaf kale. Waxa warbixin ka jeedisay Agaasimaha cusbitaalka guud Marwo Faadumo Cabdi Kaahin, oo ka warantay waxyaabihii u qabsoomay mudadii ay joogtay iyo baahiyaha xilligan taagan ee u baahan in wax lagala qabto.
Agaasimuhu waxay ku baaqday inay bulshoweyntu ka qeybqaadato qaadhaan ururinta si loo daboolo adeegyada uu shacbiga u hayo Cusbitaalka guud.
Agaasimuhu waxay sheegtay in iyadoo dhaakhaatiirtii dalku joogaan haddana ay agab la’aan darteed ay dadweynuhu dibada u tagaan hawlo caafimaad, waxayna iyadoo arrintaa ka hadlaysa waxay tidhi, “Inaga oo wadankeenii joogna oo dhakhtaradii haysana ayaynu dibada caafimaad ugu baxnaa, balse waxa innaga maqani waa agabkii lagu shaqayn lahaa iyo dhakhtaradeenii oo la gaadhsiiyo cilmiga dibadda loogu baxayo in dalka laga helo. Waxa mahad leh dawlada maanta joogta ee uu madaxweynaha ka yahay Axmed maxamed Maxamuud (Siiaanyo) waxaan filayaa wuu ku taagan yahay balan qaadkiisii ahaa wax ka qabashadda caafimaadka.”
Guddoomiyaha guddida caafimaadka ee gobolka maroodijeex Dr Aadan Yuusuf Abokor oo ka hadlay kulankaa ayaa ugu baaqay bulshada Somaliland inay kaalintooda ka geysteen qaadhaan ururin loo samaynayo kor u qaadista adeegyada caafimaad ee cisbitaalka guud.
Waxa kale isaguna kulankaa ka hadlay Guddoomiyaha Guddida maamul wanaaga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa Mr. Axmed Muxumed Madar oo ka waramay baahida adeegyada Caafimaad ee Cusbitaalka Hargeysa iyo qaabka wax looga qaban karo.